နေအိမ် / shop / ထုတ်ကုန်များ / လက်ဆောင်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဘူးများ / လက်ဆောင်များ / လက်ဆောင်အတွက်နှလုံးပုံသဏ္ဌာန်တင်သေတ္တာ
ပစ္စည်း - ပထမတန်းစား tinplate သတ္တု
ပုံစံ: Irregular, Heart shape, Special shape and so on.
အသုံးပြုမှု: ထုပ်ပိုးခြင်း, လက်ဆောင်, စုဆောင်းခြင်း
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: EN71, USA FDA, ဂျာမနီ LFBG, ပြင်သစ်အစားအစာစံ၊ EU RoHS စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပုံစံ Irregular, Heart shape, Special shape and so on.
အသုံးပြုမှု - ထုပ်ပိုးခြင်း, လက်ဆောင်, စုဆောင်းခြင်း